Inselele ye-Meme yoLimi lwaseKhaya noma Lwebele – Ukusebenzisa izinkundla zezokuxhumana ezisetshenziswa nokufinyelelwa uwonke-wonke (social media), ukuqhubela phambili izilimi namasiko ehlukahlukene kwi-inthanethi
Inselele ye-Meme yoLimi lwaseKhaya noma Lwebele
Ukusebenzisa izinkundla zezokuxhumana ezisetshenziswa nokufinyelelwa uwonke-wonke (social media), ukuqhubela phambili izilimi namasiko ehlukahlukene kwi-inthanethi
Ukubhiyozela usuku loLimi lweBele laMazwe Omhlaba olwaziwa ngokuthi yi-UNESCO’s International Mother Language Day ngo-2017 ngomhlaka 21 Februwari, sikumema ukuthi ungenele le nselele entsha neyintokozo!
Lolu suku lokubhiyoze;a uLimi lweBele, lwasungula ukuqhubela phambili kanye nokubhiyozela izilimi kanye namasiko ehlukahlukene kuwo wonke umhlaba, kanti futhi ngokugcizelela kakhulu ezilimini zomdabu, izilimi ezingakhulunywa yiningi labantu, kanye nezilimi ezisengozisini yokushabalala.
Inselele yakho: Joyina intshukumo yokuqhubekela phambili kanye nokubamba iqhaza ngokusungula imeme yolimi lwakho lwebele, ngezela ne-hashatag ebese wabelana nabanye kuwo wonke umhlaba.
Isinyathelo sokuqala – Khetha Umfanekiso noma isithombe
Khetha umfanekiso ofuna ukuwusebenzisa. Lokhu kungabi yisithombe esivamise ukusetshenziswa kwi-meme, esinjenge-stock photo esivamise ukusetshenziswa kumakumaplatfomu noma ukhethe kwezinye zezithombe zakho. Amaplatfomu amaningi enza ama-meme, asenayo vele imifakaniso ekhona. Ungasebenzisa amaplatfomu afana ne-MemeGen kanye ne-MemeGenerator. Kanti futhi siqala nelinye ikhasi elinohla lwama-site avamise ukusetshenziswa kakhulu.
Isinyathelo sesibili – Ngezela imibhalo
Ngokusebenzisa iplatifomu eyenza i-meme yamahhala noma enye i-software ozikhethela yona, khetha imibhalo ekuqaleni kanye nangezansi komfanekiso. Lo mbhalo ungaba umbhalo wehlaya ohlekisayo, noma umbhalo wento ecatshangwa kanzulu – sikukhuthaza ukuthi uzenzele i-meme ephawula ngokulondolozwa noma ukuvuselelwa kolimi
Isinyathelo sesithathu – Londoloza futhi ebese ufakela iMeme yakho kwi-inthanethi
Londoloza umfanekiso ebese uwufakela kwiplatfomu yakho oyithandayo yenkundla yezokuxhumana kawonkewonke (isibonelo, kwi-Instagram, iTwitter noma iFacebook).
Isinyathelo sesine – Ngezelela ama-Hashtag
Ngezelela i-hashtag #MemeML
Ngezelela i-hashtag yolimi (isibonelo, #IsiZulu, #Xitsonga)
Sicela uqaphele: ukuqhubela phambili nokuphakamisa izilimi ezehlukene kwi-inthanethi kusho ukwazi ukuxhumana nanganoma yiluphi ulimi ozikhethela lona, ngisho noma ungeke wakwazi ukufakela yonke ingqikithi kwidijithali ngendlela ye-elektroniki kulabo abangalwazi ulimi lwakho. Kodwa, uma ufisa ukufinyelela kwiningi labantu, ungakhetha ukuhumusha kwisigaba sombhalo wencazelo ebanzi ngemibono okungenzeka inzima ukuthi ihunyushiwe nokuguqulelwa kolunye ulimi ngemibono elula ehambelana nolunye ulimi.
Isinyathelo sesihlanu – Joyina inselele
Tholana nabanye ababelana ngama-Meme abo ngama-hashtag ama #MemeML kuma-Instagram, kuTwitter noma kuFacebook, ebese uphawula, wabelane ngokudlulisela kwabanye (share), nge-retweet, noma nge-re-post.
Cinga i-hashtag yolimi lwakho. Landela abanye abenza ama-meme ngolimi lwakho, (isibonelo, #IsiZulu, #Xitsonga).
Qinisekisa ukuthi wenza i-tag komunye umuntu, ukumnikeza “inselele” yokuthi enze imeme yakhe. Xhumana nabanye abantu ukubhiyozela izilimi ezehlukene.
Isinyathelo sesithupha – Thokoza uzijabulele!
Hlangana namanxusa ethu	Izidlamlilo ezisebenzela izilimi kwi-inthanethi, ezizobe zibambe iqhaza kwinselele ye-Meme yolimi lwasekhaya lwebele kanti futhi sithanda ukukumema ukuthi nawe uzibandakanye ngokwenza okufanayo.
Abalingani okusetshenziswana nabo
Bheka lapha uhla oluphelele lwabalingani esisebenzisana nabo!
Uma ufisa ukuba ngomunye esisebenzina nabo, sicela uxhumane nathi